နတ်ဆိုး(နိဗ္ဖာန်ဆော်)၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
..... ဓမ္မရေဒီယိုပါ..မိမိနှစ်သက်ရာလိုင်းကိုချိန်းပြီး တရားတော်နာနိုင်ပါပြီဗျာ။
Min Aung သည် နတ်ဆိုး(နိဗ္ဖာန်ဆော်)'s၏ 'ဒါန သီလ ဘာဝနာ'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"သာဓု သာဓု သာဓု။"
phyuthi သည်နတ်ဆိုး(နိဗ္ဖာန်ဆော်)ကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
saimaw joined နတ်ဆိုး(နိဗ္ဖာန်ဆော်)'s group
ဗုဒ္ဒကမ္ဘာ တရားတော်ပြန့်ပွားရေး (ဓမ္မဒါန)
၁။ တရားတော်များ လွယ်ကူစွာနာယူနိုင်ရန်၂။ တရားတော်များ ဒေါင်းလုတ်ရယူနိုင်စေရန်၃။ မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဒဘာသာမှ ကိုယ်တိုင်လေ့လာယုံကြည်မှု့ဖြင့် ဘာသာတရား စိတ်ဝင်စားလာစေရန်၎။ လူမျိုးဘာသာမရွေး ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ရန်See More
tuntunwin သည်နတ်ဆိုး(နိဗ္ဖာန်ဆော်)'s ၏ 'ဗုဒ္ဓကို ဘာကြောင့်ကိုးကွယ်သလဲ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
Nay Moe Htet သည်နတ်ဆိုး(နိဗ္ဖာန်ဆော်)'s ၏ 'ဗုဒ္ဓကို ဘာကြောင့်ကိုးကွယ်သလဲ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည် နတ်ဆိုး(နိဗ္ဖာန်ဆော်)'s၏ 'မင်းနားလည်ဖို့'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်နတ်ဆိုး(နိဗ္ဖာန်ဆော်)'s ၏ 'မင်းနားလည်ဖို့' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်နတ်ဆိုး(နိဗ္ဖာန်ဆော်)'s ၏ 'မီးသွေးလိုလူ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်နတ်ဆိုး(နိဗ္ဖာန်ဆော်)'s ၏ 'အပါယ်လေးပါးကလွတ်မြောက်ပါတယ်' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
hla moe 24 သည် နတ်ဆိုး(နိဗ္ဖာန်ဆော်)'s၏ 'ဗုဒ္ဓကို ဘာကြောင့်ကိုးကွယ်သလဲ'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည် နတ်ဆိုး(နိဗ္ဖာန်ဆော်)'s၏ 'ဒါနနဲ့ သီလ မလိုဘူးတဲ့လား?'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
ဘာကြောင့်မြတ်ဗုဒ္ဓကို အားကိုးရသလဲဆိုရင်အဖြေက တစ်လုံးတည်းရယ်။အမှန်တရားကို ပြောပြလို့ဘုန်းကြီးတို့ အားကိုးနေရတာဟုတ်ဘူးလား။ဗုဒ္ဓကို ဘာကြောင့်ကိုးကွယ်သလဲ။သစ္စာတရားကို ဟောပြလို့ဆရာအနေနဲ့ ကိုးကွယ်တာ။ဗုဒ္ဓရဲ့ ဂုဏ်တော်ကိုးပါးထဲမှာ`သတ္တာဒေဝ မနုဿာနံ´ဒီလိုပါတယ် မဟုတ်လား။ဗုဒ္ဓသည် သတ္တ-ဆရာဘယ်သူ့ဆရာလဲ။လူနှင့် နတ်တို့၏ ဆရာ။အကြီးဆုံးသောဆရာ။ဒီတော့ ဘုန်းကြီးတို့အမျိုးကောင်းသား၊အမျိုးကောင်းသမီးတွေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကဗုဒ္ဓကို ကိုးကွယ်တာဟာသက်ရှိလောကကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ဆရာအနေနဲ့ ကိုးကွယ်နေကြပါတယ်။ကယ်တင်ဖို့…See More
ဒီဘလော့ကို ဇွန် 23, 2015 တွင်4:00pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment2Likes
လူနှင့် နတ်တို့၏ ဆရာ။
"ခရုရှက်" နှင့် ရွှေတိဂုံစေတီတော်
ဒီဘလော့ကို မတ် 26, 2013 တွင်1:57am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။6Comments5Likes
1955 ကမ္ဘာ့ထိပ်သီး ကွန်မြူနစ်ခေါင်းဆောင် ဆိုဗီယက်ဝန်ကြီးချုပ် "ခရုရှက်" မြန်မာနိုင်ငံလာရောက်စဉ် ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီးကို လက်အုပ်ချီကန်တော့ရာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တစ်ဦးက - "ခင်ဗျားဟာ ကွန်မြူနစ်လုပ်နေပြီး ဘုရားရှိခိုးရသလားဗျ" ဟုမေးလိုက်၏။
ဒီဘလော့ကို မတ် 19, 2013 တွင်1:57am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။3Comments0Likes
ဘုရားအလောင်းက ထမင်း စားကြွင်းတွေကို ငါးလိပ်တွေကိုကျွေးပြီး "ဤငါးလိပ်တွေကို အစာကျွေးရသော ကုသိုလ်ကောင်းမှုကို မြစ်စောင့်နတ်…
ဒီဘလော့ကို မတ် 12, 2013 တွင်12:51am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။4Comments5Likes
အတွင်းကမ္ဘာ Inidividual World တစ်ယောက်ဆီ တစ်ယောက်ဆီနဲ့ ဆိုင်တဲ့ကမ္ဘာရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို အရင်လုပ်
မကြာခင်ကလေးက အိန္ဒိယပြည်ကြီးရဲ့ မြောက်ဘက် ကက်ရ်ှမီးယားရဲ့ အရှေ့မြောက် လာဒက်က ပြန်လာတယ်။…
3:53pm အချိန်အောက်တိုဘာ 15, 2015, တွင် phyuthi မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
6:52pm အချိန်အောက်တိုဘာ 15, 2012, တွင် သဒ္ဓါဖြူ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
7:38am အချိန်အောက်တိုဘာ 15, 2012, တွင် hla moe 24 မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
မွေးနေ့ က စပြီး လိုတရဖြစ်ပါစေ
6:53pm အချိန်ဇွန် 25, 2012, တွင် ဇော်ထက်မောင် မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
1:59pm အချိန်မေ 9, 2012, တွင် စန္ဒာ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
သတိတရနဲ့ လာလည်ပါတယ်ရှင်။ ။
9:22pm အချိန်ဒီဇင်ဘာ 3, 2011, တွင် နီစံ (အနီ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ကိုကြီးရေ ညီမလေး အလည်ရောက်လာတယ်
ကိုကြီးပြန်ရောက်ရင် အက်မင် group မှာ လာပြီး အားလုံးကို နှုတ်ဆက်ပေးပါအုံး..နော်
ညီမလေး တပတ်ခွင့်ယူမှာ မို့လို့...နောက်အပတ်ကျမှ တွေ့မယ်နော်
ကိစ္စရှိလို့ လိုင်းမှာ မတွေ့ရင် offline message ထားခဲ့ပါ...နော်..
10:45pm အချိန်နိုဝင်ဘာ 2, 2011, တွင် နီစံ (အနီ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
8:25pm အချိန်အောက်တိုဘာ 31, 2011, တွင် စန္ဒာ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
လာလည်ပါတယ် . ကောင်းသောနေ့လေး ဖြစ်ပါစေရှင်...
10:11am အချိန်အောက်တိုဘာ 15, 2011, တွင် စန္ဒာ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
၁၅.၁၀.၂၀၁၁ တွင်ကျရောက်သော မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင် စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့်ပြည့်စုံပြီး သာသနာ့အကျိုးကို ယခုထက်ပို၍
သယ်ပိုးနိုင်ပါစေလို့ ဗုဒ္ဓကမ္ဘာမှ အဖွဲ့ဝင်များကိုယ်စား ညီမက ဆုမွန်ကောင်းများ တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်...